Varwiri veKodzero dzeVanhu Voshushikana neZviri Kuitika Munyika
Chikunguru 28, 2020
An anti-riot police man in Zimbabwe tackles a woman with his boot as they dispersed a crowd gathered to hear an address by leader of the MDC (Movement for Democratic Change) Alliance, Nelson Chamisa at Morgan Tsvangirai House, the party headquarters, in H
Mamiriro akaiata zvinhu munyaya dzematongerwo enyika ari kuramba achiita manyama amire nerongo panguva iyo paine hurongwa hwekuratidzira munyika uye vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti vari kushushikana kuti zvinhu zvinogona kuipisisa zvachose munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDhewa Mavhinga, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiwedzera.
Mumazuva mashoma apfuura, imwe nhengo yeboka revechidiki mubato reMDC Alliance, VaTakunda Madzana vanonzi vakapambwa kubva pamba pavo kuMagwegwe husiku nevanhu vasingaziikanwe kuti ndivanaani vakashungurudzwa ndokubva vasiiwa musango.
Mumazuva mashoma apfuura vamwezve vanhu vasingaziikanwe kuti ndivanani vakasvika pamba peimwezve nhengo yeMDC Alliance, VaArnold Batirai, avo vanovewo kanzura weguta reBulawayo vakavhundutsira mudzimai wavo.
Mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu reBulawayo, VaSwithern
Chiroodza, vati zviitiko izvi pamwe nezvimwe zvakadai zvakaitika munguva pfupi yapfuura kune dzimwe nzvimbo munyika zvinoratidza kuti
hurumende yeZanu PF ishiri yagara ine muririro wayo pakumbunyikidza
Asi mumashoko avakatura kuvatapi venhau muHarare nezuro, vakafanobata chinzvimbo chemutauriri weZanu PF, VaPatrick Chinamasa, vakati MDC Alliance ine tsika yekutaura manyepo nezvekushungurudzwa kwenhengo dzayo, vachiti iyi inzira yekuda kusvibisa zita remutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nehurumende yeZanu PF.
Murongi wemabasa musangano reCivil Society and Churches Joint Forum, Muzvare Abigail Mupambi, vati kunyange hazvo mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka, vanobvumirana nemaonero ekuti kune vari kupiwa mari kuti vasvibise zita renyika.
Vakadzingwa muZanu PF muboka revechidiki, VaGodfrey Tsenengamu, vaudza Studio 7 kuti ivo ndemumwe wevaimbove nepfungwa yekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu kunyanya avo vane maonero akasiyana neZanu PF ndedzekunyepa.
Asi vati vakazozvionera pamhuno sefodya mushure mekushungurudzwa ivo pachavo vakatiwo vanhu havafanirwe kubvuma kutyisidzirwa nemaitiro akadai pakurwisa huwori nemamwe matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
VaTsenengamu, VaJob Sikhala, VaPromise Mkhwananzi, VaPeter Mutasa
veZimbabwe Congress of Trade Unions, naVaObert Masaraure evAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ndevamwe vevanhu vane chitsama vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe nenyaya yekuda kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi weChishanu.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGOForum, VaMusa Kika, vashorawo nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika vachiti ikodzero yevanhu kuti varatidzire murunyararo.
Vashorawo kwavati kusashanda zvakanaka kwemapurisa.
Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi, vaudza
Studio 7 parunhare kuti hapana chakaipa pakuti mapurisa ashambadze
mazita evanhu vaanoda kubvunzurudza.
Pamubvunzo wekuti zvii zvavari kuita panyaya dzekushungurudzwa kana kupambwa kwevamwe vanhu munyika, Assistant Commissioner Nyathi vati nyaya dzose dzakamhang’arwa kwavari dziri kuferefetwa.
Sangano reEvangelical Fellowship of Zimbabwe rabudisa gwaro
rekuratidzawo kusafara kwaro nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Rati kunyange hazvo zvakakosha kuti pave nematanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19, kusamira zvakanaka kwezvehupfumi munyika uye huwori, zviri kuita kuti veruzhinji vatsutsumwe.
Rakurudzira kuti munyika muve nenhaurirano dzechokwadi senzira
yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hurumende iri kuti hurongwa hwekuratidzira haufanirwe kuenderera mberi
sezvo kuita izvi kuchigona kuisa veruzhinji panjodzi yekutapurirana
Murongi wekuratidzira uku, VaJcob Ngarivhume, pamwe nemutapi wenhau, Hopewell Chin’ono, vari muhusungwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga.
Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, uye magweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights, akapikisa mutongo uyu nezuro mudare reHigh Court, iro riri kutarisirwa kupa mutongo waro neChitatu.